सेक्सुअल फिटनेसः के हामी सेक्सुअली फिट छौं ?-Nepali online news portal
यौनको कुरा गर्नसाथ हाम्रो अनुहार लाजले रातो हुन्छ । हुन त यौनको सन्दर्भमा समाज क्रसम खुल्दै गएको छ । यद्यपी त्यसमा परिपक्कता भने आएको देखिदैन । यस्तो पृष्टभूमीमा अक्सर हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, ‘के हामी सेक्सुअली फिट छौं ?’
एक सामान्य व्यक्तिलाई यौनको आवश्यक्ता र चाहाना हुन्छ ।
यस किसिमको चाहाना व्यक्ति अनुसार एकनास हुँदैन । कसैलाई कम हुन्छ, कसैलाई बढी ।
फेन्टासी अर्थात कल्पना गर्नु, कुनै खास व्यक्तिप्रति हामी आकषिर्त हुन्छौ भने, उसको बारेमा सोच्नु वा यौन सम्पर्कको इच्छा गर्नु स्वभाविक र सामान्य हो ।
यौन इच्छा भएपछि मास्टरबेट अर्थात हस्तमैथुन गर्नु पनि स्वस्थ्य मानिन्छ ।
यदि माथि उल्लेखित तमाम लक्षण मिल्छ भने, हामी सेक्सुअली ठिक छौ भनेर बुझ्न सक्छौ । यदि यौन इच्छामा ह्रास हुनु भनेको सेक्सुअली फिटनेस कम हुनु हो ।
हाम्रो यौन जीवन कति राम्रो छ ?
के यौन सम्बन्धबाट आफु र पार्टनरले पहिले जस्तो सन्तुष्ट पाइरहेका छौं ?
शारीरिक क्रिया भएपनि भावनात्मक रुपले आनन्द लिइरहेका छौ ?
यी तमाम प्रश्न आफु स्वंम र आफ्ना पार्टरसँग गर्नुपर्छ, यसबाट थाहा हुन्छ कि हामी कति सेक्सुअली फिट छौ ?
सन्तुलित, सक्रिय र विधिगत् यौनक्रिया जीवनकै अहंम हिस्सा हो । यसले खासगरी दम्पतीबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न सहयोग गर्छ । तर, अहिलेको व्यस्त दिनचर्याले दम्पतीको यौन जीवन खलबलिदै गएको छ । दिनभर काम, करियर, पैसा, परिवारको दौडधूपले गर्दा दम्पतीको अन्तरंग सम्बन्ध खुकुलो बन्दै गएको छ । शारीरिक तथा मानसिक थकान, तनाव आदिले गर्दा यौन क्रिया प्रभावित भएको छ ।यौन जीवन किनपनि सुमधुर र सक्रिय हनुपर्छ भने, यसले दम्पतीको स्वस्थ्यसँग सोझो सरोकार राख्छ । अध्ययनहरुमा भनिएको छ, विवाहित व्यक्ति कुमार व्यक्तिको तुलनामा बढी स्वस्थय र दीघायु हुने गर्छन् । यसले पनि यौनको महत्वलाई प्रष्ट पार्छ । यौन लाज मान्नुपर्ने कुरा होइन । यो प्राकृतिक र स्वभाविक प्रक्रिया हो । यद्यपी यसको सीमा र विधी छन् । जथाभावी वा जबरजस्ती गरिने यौन क्रियालाई अपराध मानिन्छ ।
नतिजा, दम्पती यौनमा उदासिन हुन सक्छन् । उनीहरुको यौनजीवन खल्लो एवं रसहिन हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा आफुहरु कति सेक्सुअली फिट छौ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि निम्न टिप्स उपयोगी हुनसक्छ ।
मानसिक तनाव, कामको बोझ, घरेलु जिम्मेवारीले यौनमा उदासिनता ल्याउँछ । संभव भएसम्म यस्तो तनाव बेडरुममा लान हुँदैन । दम्पतीले आपसमा मिलेर समस्याको समाधान खोजौ । त्यसैले आफ्नो सम्बन्ध र यौन जीवनमा दैनिक कामको असर पर्न दिनुहुँदैन ।
सेक्सुअली फिटनेस धेरै हदसम्म आपनो शारीरिक फिटनेसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तर, यदि कुनै सेक्सुअल वा शारीरिक समस्या छ भने परामर्शदाताको सल्लाह लिनैपर्छ । योग वा व्यायामलाई आफ्नो जीवनशैलीको हिस्सा बनाउनुपर्छ ।